Canary Islands mma akụkụ 1 na 2
Canary Islands mma akụkụ 1 na 2 3 afọ 3 ọnwa gara aga #547
Ebudatala m ma wụnye akụkụ nyocha Canary Islands1 na 2. Mmetụta izizi mgbe m malitere ife efe FSX Ntugharị Steam na La Palma (GCLA) dị oke mma. Ọmarịcha mara mma !!
Agbalịrị m ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ ma ahụrụ m ụfọdụ nsogbu nke m ga-achọ iji aka gị nyere gị aka. N’okporo ụzọ awara awara Tenerife South (GCTS) o yiri ka enwere nsogbu nsogbu ma ọ bụ esemokwu dị n'etiti ebe dịpụrụ adịpụ na ebe a na-ama ọsọ ọsọ, n'ihi na n'akụkụ ụfọdụ nke ugwu runway na-apụta ma yie ka ọ na-egbochi runway ?? Mgbe m ga-eme taxi site na ugwu ahụ, ụzọ ndị ọzọ dị warara ahụ na-egosi ụdị ihe dị iche iche dị n'elu ya. Mgbe m lere anya n’ọdụ ụgbọ elu site na ikuku, ihe niile dị ka nke ọma. Ọ dị nwute na otu nsogbu ahụ na-eme na ọdụ ụgbọ elu Los Rodeos (GCXO). Okwu ikpeazụ: ụzọ ịgba ọsọ na Gran Canaria (GCLP) dị ezigbo mkpa. Onweghi nọmba ọnya ịgba ọsọ na ọnya ọcha na aka ekpe na aka ekpe nke runway. Wayzọ ọpụpụ na-adị ka eriri ojii. Nke a bụ ihe na-erughị ihe isi ụgbọ elu elu ụzọ anya.
Enwere m olileanya na nkọwa m doro anya na enwere m olileanya ịnụ ụfọdụ aro iji dozie nsogbu ndị a.
Canary Islands mma akụkụ 1 na 2 3 afọ 3 ọnwa gara aga #550
Nsogbu ndị a na ụgbọelu GCTS na GCXO ka edozila site na iji ORBX Vector Configuration tool na-eme ka ọ ghara ịdaba na Airport Elevation Corrections maka GCTS na GCXO. Nanị nsogbu nke fọdụrụ bụ nkọwa nke okporo ụzọ ụgbọ elu GCLP. Ana m atụ anya aro gị maka nke a.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: James6
Canary Islands mma akụkụ 1 na 2 3 afọ 3 ọnwa gara aga #551
Achọpụtare nsogbu site na ịwụnye ihe ngosi nke nnukwu ụgbọ elu Gran Canaria (GCLP) site na Rikooo. Nsonaazụ dị oke !! Daalụ.
Oge ike page: 0.207 sekọnd